Dheeman Cusub oo ARCHOS ah: Qeexitaanno, Qiimo iyo Siidayn | Androidsis
ARCHOS cusub Dheeman: Taleefan casri ah oo cusub oo leh kamarad laga soo noqon karo
ARCHOS ma aysan dooneynin inay sugto MWC 2019 si ay u soo bandhigto casriga cusub. Nooca ayaa nooga tagaya qaabkiisa cusub, kaas oo ku yimid magaca New Diamond. Waa taleefan casri ah oo nooca Faransiiska ah uu layaab ku leh joogitaanka kaamirada laga noqon karo, taasoo si tartiib tartiib ah ugu soo kordheysa isbeddellada kale ee sanadkan suuqa taleefanka.
In kasta oo kamaradani dib looga noqon karo aysan ahayn muuqaalka kaliya ee ka dhex muuqda casriga casriga. Maxay tahay sababta Dheemankaan cusub ee ARCHOS Waxay sidoo kale la socotaa dareeraha faraha ee lagu dhejiyay shaashadda. Markaa waxay la kulantaa laba astaamood oo aad mooddo maanta.
Guud ahaan, waxaan ku qeexi karnaa inay tahay taleefoon kaas waxaa laga dhex bilaabay shirkadda Faransiiska. Waxay si fiican u hoggaansameysaa marka la eego qeexitaannada, iyada oo aan noqon meesha ugu sarreysa. Laakiin waxay ballanqaadeysaa waxqabad wanaagsan, marka lagu daro qiimo la hubo inuu xiiso ka dhex abuurayo isticmaaleyaal badan. Waa waxa ka caawin kara taleefankan inuu si fiican u iibiyo.
1 Tilmaamaha ARCHOS Dheeman Cusub
Tilmaamaha ARCHOS Dheeman Cusub
Waxyaabaha runtii dad badani jecelyihiin ayaa ah mahadnaqa joogitaanka kamaradda dib looga noqon karo, shaashadda taleefanka malaheyn buro ama dalool. Sidan oo kale, waxay u oggolaaneysaa ARCHOS in ay doorteen shaashad aad u nadiif badan, oo leh looxyo aad u dhuuban. Wax in yar u dhow fikradda shaashadda oo dhan. Kuwani waa faahfaahinta taleefanka:
Screen: AMOLED 6,39 inji oo leh saamiga 19,5: 9 iyo FullHD + xallinta 2.340 × 1.080 pixels
Gacaliye: MediaTek Helio P70
Kaydinta Gudaha: 128 GB (oo lagu ballaarin karo microSD illaa 1 TB)
Cámara trasera: 16 + 5 Xildhibaan leh albaab f / 1.8
Kaameradda hore: 12 Xildhibaan leh fur f / 2.0
Nidaamka hawlgalka: Android 9 Pie
Batariga: 3.400 mAh oo leh fiilo wireless ah
Xuduudaha kala duwan: 4G LTE, 5GHz Wi-Fi, Bluetooth 4.2, USB-C
kuwa kale: Dareenka faraha ee shaashadda, NFC
Naqshad-caqli-gal ah, taleefanka ayaa ku habboon fikradda dhammaan shaashadda ku dhowaad dhammaantood. Astaantu waxay u heellan tahay inay hoos u dhigto looxyada qaabkan, iyada oo kaameradda laga soo dhejinayo shaashadda nidaamkan ka dhigaya mid laga noqon karo. Sida ay xaqiijisay shirkadda ARCHOS lafteeda, the shaashadda taleefanka ayaa ku fadhiya in ka badan 90% xagga hore isku mid ah. Taas oo shaki la’aan cadeynaysa inay ka faa’iideysteen horusocodkan si buuxda.
ARCHOS ayaa isticmaashay processor-ka sideed-aasaasiga ah ee MediaTek Helio P70, kaas oo la socda 4 GB oo RAM ah iyo 128 GB oo ah kaydinta gudaha ah, oo lagu sii ballaarin karo iyadoo la isticmaalayo kaarka microSD ee ilaa 1 TB ah Marka waxay u oggolaan doontaa dadka isticmaala inay haystaan ​​tiro badan oo faylal ah oo la keydiyo xilli kasta.
Sidoo kale, imika wuxuu la yimaadaa Android Pie asal ahaan. Batarigiisu waa 3.400 Mah, oo ballan qaadaya ismaamul ku filan. In kasta oo layaabka aaladda uu yahay joogitaanka Qi wireless-ku-dallaca, imisa joogitaan ayaa kasbanaya Android. Taas oo waliba xaqiijinaysa in astaantu aaysan u adeegsan biraha qaabaynta aaladda. Marka waa suurtagal in lagu isticmaalo culeyska noocan ah dushiisa.
Marka laga hadlayo kaamirooyinka, ARCHOS waxay leedahay laba kamaradood oo gadaal ah, leh 499 megapixel Sony IMX 16 shidma iyo mid labaad oo ka socda Samsung. Afka hore wuxuu ka kooban yahay dareemayaal Samsung ah, 8 MP. Waxaan ka helnaa dhowr nooc oo toogasho ah, sida AI, Sawir, Video, Qurux ama HD, iyo kuwo kale.
ARCHOS waxay xaqiijisay in taleefanka si rasmi ah looga arki karo MWC 2019. Markaa dhammaan kuwa tagaya Barcelona waxay awoodi doonaan inay ku arkaan aaladdan cusub ee sumadda meesha taal. Fursad wanaagsan oo lagu arko sida ay u shaqeyso, gaar ahaan tan kaamerada laga noqon karo.
Marka la eego suuqgeeda, waa inaan sugnaa ilaa May. Shirkadda ayaa sheegtay in ay bilaabi doonto bishaas, goorta wuxuu imaan doonaa dukaamada qiimo dhan 299 euro. Ikhtiyaar wanaagsan oo dhex-dhexaad ah oo ku saabsan Android.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » ARCHOS cusub Dheeman: Taleefan casri ah oo cusub oo leh kamarad laga soo noqon karo
Maxaan ka filan karnaa Huawei ee MWC 2019?
Ku dhowaad 100.000 qof ayaa horey u sii xareeyay Xiaomi Mi 9